မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းကို ၂၀၂၆ ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားပြီ - Thadin
[ May 21, 2019 ] ဒီနွေကအပူရှိန်များပြီး မိတ်တွေထွက်ကြလို့ မိတ်ပျောက်တဲ့ဆေးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…! HEALTHY
[ May 21, 2019 ] “လူသိရှင်ကြား အထုပ်ဖြည်ရင်ဖွင့်မယ့်အစား ကိုယ့်တရားနဲ့ကိုယ်နေ” KNOWLEDGE
[ May 21, 2019 ] ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ဆွမ်းတော်စွန့်တဲ့ ငှက်ပျောသီးတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ…! NEWS
[ May 21, 2019 ] နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး ရက်ရက်စက်စက်သတ်သွားတဲ့ သာကေတလူသတ်မှု CCTV မှတ်တမ်းထွက်ပေါ်…! NEWS
Homeအားကစားကဏ္ဍမြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းကို ၂၀၂၆ ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားပြီ
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းကို ၂၀၂၆ ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားပြီ
January 28, 2019 Admin Kwee အားကစားကဏ္ဍ Comments Off on မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းကို ၂၀၂၆ ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားပြီ
မြန်မာအသင်းကို ၂၀၂၆ ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားတယ်၊ ၂၀၂၃ အာရှဖလားကတော့ ၀င်ကိုဝင်ရမယ် ။ အာဆီယံဒေသတွင်းပြိုင်ပွဲများတွင် ရုန်းကန်နေရသည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းကို စနစ်တကျပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၆ ကမ္ဘာ့ဝင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားကြောင်း နှင့် ၂၀၂၃ အာရှဖလားကို သေချာပေါက် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် စီအီးအို ဦးဘုန်းနိုင်ဇော်က ပြောသည်ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ၃၂သင်းဖြင့် ကျင်းပနေရာမှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲမှစ၍ ၄၈သင်းဖြင့်တိုးမြှင့် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး အာရှနိုင်ငံများမှကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ခွင့် လေးနေရာခွဲ ရရှိနေရာမှ ရှစ်နေရာခွဲအထိရရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
” ၂၀၂၆ ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ဖို့ Targetက နည်းနည်းဝေးတဲ့ Targetပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့မရှိဘူး။ အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့နေရာကလည်း ၈နေရာခွဲအထိ ရရှိလာမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ နည်းစနစ်ရိုက်တာကသူယုံကြည်တာကတော့ မြန်မာတွေမှာ Tatent ရှိတယ် Talent ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုလို့ စနစ်ကျတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိတယ်။အနည်းဆုံးကတော့အာရှဖလားကို ရောက်ကို ရောက်နေရမယ်။ ၂၀၂၃ အာရှဖလားကတော့ ရောက်ကိုရောက်ရမယ်။ အမှန်ကအခု( ၂၀၁၉) အာရှဖလားထဲကရောက်ရမှာ” ဟု ဦးဘုန်းနိုင်ဇော်က ပြောသည်။
လေးနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပနေသည့် အာရှဖလားပြိုင်ပွဲကို ယခင်၁၆သင်းဖြင့် ကျင်းပနေရာမှ ယခု ယူအေအီးနိုင်ငံ၌ ကျင်းပနေသည့် ၂၀၁၉ ပြိုင်ပွဲမှစ၍ ၂၄သင်းဖြင့် တိုးမြှင့်ကျင်းပခဲ့သောကြောင့်အာဆီယံဒေသတွင်းမှ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်အသင်းတို့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြသည်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းက ခြေစစ်ပွဲအဆင့်တွင် အုပ်စုဒုတိယ ရရရှိလျှင် အာရှဖလားဝင့်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ကာဂျစ္စတန်၊ အိန္ဒိယအသင်းတို့နောက်အုပ်စုတတိယနေရာသာ ရရှိခဲ့၍ အခွင့်အရေးနှင့်လွဲချော်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။မိုင်းစောလွင်ဓာတ်ပုံ-MFF
မွနျမာ့လကျရှေးစငျအသငျးကို ၂၀၂၆ ကမ်ဘာ့ဖလားဝငျဖို့ ပဈမှတျထား
မွနျမာအသငျးကို ၂၀၂၆ ကမ်ဘာ့ဖလားဝငျဖို့ ပဈမှတျထားတယျ၊ ၂၀၂၃ အာရှဖလားကတော့ ဝငျကိုဝငျရမယျ ။ အာဆီယံဒသေတှငျးပွိုငျပှဲမြားတှငျ ရုနျးကနျနရေသညျ့ မွနျမာ့လကျရှေးစငျအသငျးကို စနဈတကပြွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြား ပွုလုပျသှားမညျဖွဈပွီး ၂၀၂၆ ကမ်ဘာ့ဝငျဖို့ ပဈမှတျထားကွောငျး နှငျ့ ၂၀၂၃ အာရှဖလားကို သခြောပေါကျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျနိုငျရမညျဖွဈကွောငျးမွနျမာနိုငျငံဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ စီအီးအို ဦးဘုနျးနိုငျဇျောက ပွောသညျ။
ဖီဖာ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို ၃၂သငျးဖွငျ့ ကငျြးပနရောမှ ၂၀၂၆ ခုနှဈပွိုငျပှဲမှစ၍ ၄၈သငျးဖွငျ့တိုးမွှငျ့ ကငျြးပသှားမညျဖွဈပွီး အာရှနိုငျငံမြားမှကမ်ဘာ့ဖလားဝငျခှငျ့ လေးနရောခှဲ ရရှိနရောမှ ရှဈနရောခှဲအထိရရှိသှားမညျဖွဈသညျ။
” ၂၀၂၆ ကမ်ဘာ့ဖလားဝငျဖို့ Targetက နညျးနညျးဝေးတဲ့ Targetပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာတော့မရှိဘူး။ အဲ့ဒါကဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့အာရှနိုငျငံတှရေဲ့နရောကလညျး ၈နရောခှဲအထိ ရရှိလာမှာ ဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ နညျးစနဈရိုကျတာကသူယုံကွညျတာကတော့ မွနျမာတှမှော Tatent ရှိတယျ။
Talent ရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့မိုလို့ စနဈကတြဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုတှလေုပျနိုငျမယျဆိုရငျဖွဈနိုငျမယျဆိုတဲ့ အနအေထားမှာ ရှိတယျ။အနညျးဆုံးကတော့အာရှဖလားကို ရောကျကို ရောကျနရေမယျ။ ၂၀၂၃ အာရှဖလားကတော့ ရောကျကိုရောကျရမယျ။ အမှနျကအခု( ၂၀၁၉) အာရှဖလားထဲကရောကျရမှာ” ဟု ဦးဘုနျးနိုငျဇျောက ပွောသညျ။
လေးနှဈတဈကွိမျကငျြးပနသေညျ့ အာရှဖလားပွိုငျပှဲကို ယခငျ၁၆သငျးဖွငျ့ ကငျြးပနရောမှ ယခု ယူအအေီးနိုငျငံ၌ ကငျြးပနသေညျ့ ၂၀၁၉ ပွိုငျပှဲမှစ၍ ၂၄သငျးဖွငျ့ တိုးမွှငျ့ကငျြးပခဲ့သောကွောငျ့အာဆီယံဒသေတှငျးမှ ဖိလဈပိုငျ၊ ထိုငျး၊ ဗီယကျနမျအသငျးတို့ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရရှိခဲ့ကွသညျ။
မွနျမာ့လကျရှေးစငျအသငျးက ခွစေဈပှဲအဆငျ့တှငျ အုပျစုဒုတိယ ရရရှိလြှငျ အာရှဖလားဝငျ့ခှငျ့ရမညျဖွဈသျောလညျး ကာဂစ်ြစတနျ၊ အိန်ဒိယအသငျးတို့နောကျအုပျစုတတိယနရောသာ ရရှိခဲ့၍ အခှငျ့အရေးနှငျ့လှဲခြျောခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။မိုငျးစောလှငျဓာတျပုံ-MFF
စီးပွားရှာသူတိုင်း သိသင့်တဲ့ စီးပွားရေးမြေပုံ ( ၇ ) ခု
နောက်လူတွေ ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ကိုယ်တိုင်အသက်နဲ့ရင်းပြီး ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းမှာ သေကံမရောက် သက်မပျောက်ခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့
This Month : 40073
This Year : 235471
Total Users : 594495
Total views : 2729159